‭Magrudy.com - T. Bandla-Thunzi‬
T. Bandla-Thunzi author
IOxford Ukhanyo yincwadi yoLwimi IwaseKhanya egqibeleleyo elungele iklasi yesiXhosa. Inazo zonke iikhomponenti ozifunayo ukugcina abafundi bakho besemdleni unyaka wonke. Ibonelela zonke iindidi zabafundi eklasini. Ukhanyo lubonelela abafundi nootitshala ngomxholo ophuhlisa izakhono ezahlukeneyo nemisebenzi enika abafundi ithuba lokuziqhelanisa nemiba yolwimi. IsiKhokelo sikaTitshala esisebenziseka lula sinezifundo nemisebenzi yokuhlola eqinisekisa ukuba umsebenzi ugqitywa ...
Oxford ukhanyo CAPS: Gr 3: Reader: Home language
IOxford Ukhanyo yincwadi yoLwimi IwaseKhanya egqibeleleyo elungele iklasi yesiXhosa. Inazo zonke iikhomponenti ozifunayo ukugcina abafundi bakho besemdleni unyaka wonke. Ibonelela zonke iindidi zabafundi eklasini. Ukhanyo lubonelela abafundi nootitshala ngomxholo ophuhlisa izakhono ezahlukeneyo nemisebenzi enika abafundi ithuba lokuziqhelanisa nemiba yolwimi. IsiKhokelo sikaTitshala esisebenziseka lula sinezifundo nemisebenzi yokuhlola eqinisekisa ukuba umsebenzi ugqitywa ngexesha elifanelekileyo. Ngokwenkcubeko ityebile kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ukubhalwa kwayo ngokweemfuno zeCAPS kuyenza ibe yeyona ikhethwayo ngootitshala boLwimi IwaseKhaya.
by P. Njengele, N. Mkruqulwa, X. Mjele, N. Mafenuka, K. Biyana, T. Bandla-Thunzi
in Oxford ukhanyo
Oxford Ukhanyo: Reader 1: Oxford ukhanyo CAPS: Reader 1: Gr 1 Gr 1
Oxford ukhanyo CAPS: Gr 3: Learner's book: Home language
Oxford ukhanyo CAPS: Gr 1: Learner's book: Home language
Oxford Ukhanyo CAPS: Big book 2: Oxford ukhanyo CAPS: Big book 2: Gr 3 Gr 3
Oxford ukhanyo CAPS: Gr 3: Workbook: Home language
Oxford Ukhanyo CAPS: Oxford ukhanyo CAPS: Gr 2: Workbook Gr 2: Workbook
Oxford Ukhanyo: Oxford ukhanyo CAPS: Gr 1: Workbook Gr 1: Workbook
in Oxford successful ukhanyo
Oxford Ukhanyo CAPS: Big book 1: Oxford ukhanyo CAPS: Big book 1: Gr 1 Gr 1
Oxford ukhanyo CAPS: Big book 2: Gr 2: Home language
Oxford ukhanyo CAPS: Reader 1: Gr 2: Home language
Oxford ukhanyo CAPS: Gr 1: Teacher's guide: Home language